‘‘मानव पुरूषार्थी छ अनि आफ्नो नियति र भाग्यको निर्माता स्वयम्‌ हुन्छ। मनुष्य परिस्थितिको चुनाउ गर्नुमा स्वतन्त्र नरहे तापनि परिस्थिति-विशेषप्रति आफ्नो स्वतन्त्र बाटो चयन गर्नु स्वतन्त्र रहन्छ। ...
"दार्चुला" नरेश​: भमरा थिइनँ, माली पनि होईन म, त्यसैले हो नि, फुलहरु शीत थिएन म। फुल हुन पनि, कहिले भएन रहर मलाई। ...
प्राकृतिक नियमका सवालमा हरेक प्राणीको प्रमुख दायित्व भनेको बच्चा जन्माएर आफ्नो वंशको निरन्तरता गर्नु हो। पोथीको प्राकृतिक दायित्व भनेको बच्चालाई गर्भमा विकास गरेर जन्म दिनु र बच्चाको रेखदेख गर्नु हो। भालेको प्राकृतिक दायित्व भनेको, बच्चालाई हुर्काउनुमा पोथीको सहायक हुनु हो। ...
हो म बेश्या हुँ, मलाई माल चाहिन्छ माल
गंगबुको पुल भन्दा सुन्धारा अलि शान्त थियो । पुलमा झुम्मीनेहरु त्यती हुँदैन्थे । हामीलाई मान्छेहरुको भिड अत्याधकि भन्दा पनि उचित ग्राहकहरु मिल्नु ठुलो कुरा थियो । मान्छेहरु आएर समय पास गरेर गफ गर्नु भन्दा उचित मुल्य दिएर उपयोग गरेको सहय हुन्थ्यो । ...
एक पटक एउटा अनौंठो घटना भयो । सायद कोठीहरुमा अपवादका रुपमा हुने घटना । एकपटक हाम्रो बंगलामा मोजमस्तीका लागि कलेजका केही केटाहरु आएका थिए । ती केटाहरु आ आफुले मन पराएका केटीहरु बोकेर कोठामा गए । ती मध्येकै एउटा केटाले मलाई राज्यो र मेरो कोठामा आयो । त्यती बेला म कलिलै थिएँ । ...
महाभूकम्प गएकाे याे वैशाख महिनाले ठ्याक्कै २ वर्ष पुग्याे। २०७२ सालकाे यहि वैशाखकाे १२ गते महाभुकम्प गएकाे थियाे। १४ वटा जिल्ला त ध्वस्तै भएकाे थियाे। हजाराै मान्छेहरु मरे,हजाराै बेपत्ता,हजाराै घाईते, अपाङ्ग, हजाराै घरवारविहिन, टुहुरा भए। मर्ने त मरेर गए, बाँच्नेको जिन्दगि कष्टकर बन्न पुग्यो ! ...
एउटा अन्तरजातिय अपुरो प्रेम कथा
चाँदनी केसी,कहिले अतित सम्झिँदा धरधरी रुवाउँछ पनि र कहिले त्यहि अतित सम्झिँदा मुसुक्क मुस्कुराउन पनि मन लाग्छ । चसक्क छाती चर्काउने पनि तपाईँ हाम्रै अतित हो भक्कानिएर रुवाउने पनि हाम्रै अतित हो र कुनै अतित यस्ता हुन्छन् कि जसलाई कहिल्यै बिर्सनै सकिँदैनन् अँझ भनौँ बिर्सीएर ति अतितलाई सम्झिहालिन्छ । ...
मेरो जीवनको महत्वपुर्ण दिन चैत्र २६ गते
२७ वर्ष पहिले आजको दिन नै मेरो राजनीतिक यात्राको शुभारम्भ भएको दिन हो। "२०४६ चैत्र २६ गते पन्चायती व्यवस्थाका बिरुद्ध आफु पढ्ने शारदा मावि स्कुलबाट विद्यार्थी नेताहरुसंग नारा जुलुश गर्दै महेन्द्रनगर सदरमुकाम पुग्न ५ कि.मी. पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सिसैया भन्ने स्थानमा पुलिसले लाठी चार्ज गरि जुलुशलाई तितर बितर पारेर पन्चायती शाषकले दमन गरेको दिन हो।" ...
मानछेको मनस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो हरेक घटनाको परिणम कस्तो निकाल्छ भनेर, जसरी बस्तुको चिरित्र वा विषेशता त्यसको बनौटको आधारमा निर्भर हुन्छ । जीवित प्राणीको पनि चेतना (मस्तिस्क) को आधारमा दुनियाँको सन्देश सम्हालेको हुन्छ । त्यसैले सानो मनस्थितिका मानिसका लागिद कुनै वेला सानै कुराले पनि साह्रै खुशी र रमाइलो बनाउँछ र कुनै बेला सानै दुःखको कुराले पनि मन असाध्यै दःखित हुन्छ । मन परेको उपलब्धी हुँदा फेरी मन असाध्यै चञ्चल हुन्छ, उन्मुक्त हुन्छ । ...
"खुशी हराएको मान्छे"
"दार्चुला" नरेश​ : छाती भतभति पोल्दा, मन अतालिदा, दुखको चट्याङ शिरमा बजारिदा, बस चिच्यायो, अंह खसेन्न आँसु, किन कि, सुकि सकेका थिए आँखा। ...